Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kormeeray garoonka diyaaradaha Baydhabo “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Adan, Guddoomiyah Baarlamanka Koonfur Galbeed iyo Wasiiro ka tirsan Maamulka ayaa maanta booqdey qeybaha uu ka koobanyahay Garoonka Diyaarahada ee magalada Baydhabo oo dayactir ay ku socoto.
Wafdiga ayaa waxa ay soo kormeereen qeybaha uu ka koobanyahay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo, iyagoo indho indheeyay sida ay u socoto howlaha dib loogu dhisayo garoonka.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in garoonka magaalada Baydhabo loo habeyn doono sida kuwa caalamiga ah oo kale.
Markii uu soo dhamaaday booqashada wafadiga Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa Telefishinka Koonfur Galbeed la hadlay Wasiirka Gaadiidka, Dhulka iyo Cirka ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdullaahi Aadan Axmed (Cabdullaahi Black ) oo sheegay in kormeerka wafdiga ay ahayd sidii a ugu kuur geli lahaayeen hanaanka ay u socoto shaqada dib loogu habeynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo.
Garoonka ayaa la qorsheynayaa in uu shaqeeyo xiliga habeenkii ah sida ay xaqiijieen maamulka howsha loo xilsaaray.
Qore: Feysal Dhaayow Xuseen